トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Wonke plus [esijikelezayo ngetyala-kuphela]
kunye isixokolelwano ukuqhubeka ukuhlawula qho ethe ngqo inqununu. Kuye kwamkelwa indlela yayo intlawulo yabo ebizwa ngokuba "Maipei kuba ribonucleic". intlawulo yenyanga, ungabeka isixa sentlawulo ubuncinane ukusuka 5000 yen, nto leyo xa isixa semali kunye nenzala kuye inkqubo ithathwa.
In i "Maipei kuba ribonucleic", ukuba imali yentlawulo ubuncinane imali okanye ngaphezulu, nani ungasihlawula ukuze kulungele lula lomsebenzisi kwi imali ngokupheleleyo nokuba ngokuyinxenye. isixa esithile semali kunokwenzeka ngenxa zoqhagamshelwano Internet nangefowuni. Kwakhona, ukuba ngaba unayo imbuyiselo ngenxa ngaphezulu kwe 5000 yen, njengoko isekelwe phezu isixa semali kunye nenzala kule isixa mali, unako kwakhona ukunciphisa, ukuba kunokwenzeka Kwakhona wongezelela. Unga kwakhona lula ngokudibeneyo uhlawule imali ngokupheleleyo. 800.000 yen kwimali
Zonke Plus, kunye ikhadi lamatyala ukuba Sumitomo Mitsui Banking Corporation ukhuphe, i credit-kuphela ajikelezayo ikhadi. Xa kungekho mali yonyaka, uyakwazi ukujoyina ngaphandle ukuba abafundi bezikolo eziphakamileyo ukuba kwiminyaka 18 zizele ubudala okanye ngaphezulu. Le yinto enkulu ukuba zingahlawulwa ngesantya yakho.
umhla lokuhlawula njenge iintsuku ngenyanga 26, xa kufuneka ukuba uhlawule i ezimcaba-izinga $ 50, umzekelo, ukuba Kuthathwa ukuba ukusetyenziswa kwe 50,000 yen on June 15, ukuya kuJulayi 26, nto leyo umhla wokuqala zokuyibuyisa ngaphandle kwenzala 5000 yen ezabiwe kwinqununu, uye ahlawule yen 5110 kunye 110 yen umdla kwinyanga ezayo ngo Agasti 26.
xa kukho imali ezihambelanayo ukuya elandelayo ka September 26, unako ukuhlawula ngendlela ukuhlawula isixa ukuya 675 yen ngumdla ukunyusa plus ngaphezulu kwama-5000 yen. Ngenxa interest kuyinto umyinge wonyaka ka-18 ekhulwini umdla ribonucleic, njengoko ikhadi lamatyala ka olujikelezayo ngetyala, kodwa umiselwe ngaphezulu, le iqondo eliphezulu nenkululeko indlela ikhadi ntlawulo ingaqhelekanga, kuye bavandlakanywe kwelo nqanaba.
Ngokusisiseko, okanye ngenyanga ezayo iintsuku ezili-10 ukuhlawula ngenyanga iintsuku 15 nsinya, uze ukhethe kwinyanga ezayo iintsuku-26 ukuhlawula ekupheleni zokuqinisa. V ISA usebenzisana, ukuba iyafumaneka phesheya kwakunye basekhaya. Ngaba kwakhona isetyenziswe njengemali electronic, ungakwazi ukuthatha ithuba ID kunye WAON, njengoko MVUME LOKUNDWENDWELA LEXESHANA payWave.
Internet zingenziwa ukuba ayizalise ifom yesicelo, ekhutshwe amakhadi kwiintsuku ezintathu zomsebenzi imfutshane, uya kufumana esandleni malunga ngeveki. Isethi akhawunti debit nako kusetwa umnatha, uyakwazi ubhalisele ngokulula ngaphandle kobuxhakaxhaka utyikityo kunye ngetywina.
iye lwaziwa izibonelelo
indawo lizinga eliphezulu, ikhadi lamatyala intlawulo yonyaka iye inqanaba eliphezulu izinga ekunciphiseni 1.5%. Khomba imarike ANA kunye Rakuten, uyakwazi ukutshintsha iingongoma Amazon kunye Yahoo iindawo zokuthenga.
Bic kunye Muji, unako kwakhona ukutshintsha amanqaku ezifana Nissen. 1 indawo uzuze ngalinye 1,000 yen nganye ikhadi kuthenga, zalatha enyangeni leyo eye yenzeka umdla ribonucleic iya kuba likriwa ezintathu. amanqaku Ukudluliselwa kwezinye iinkampani kwekhadi iyafumaneka. Ukuba
credit card ekucetyiswa ukuba aba bantu, kwaye abo bakholwayo okulungileyo kubhetele ukuba zibe kunokwenzeka, intlawulo ikhadi oko kumlungele na abantu kucingelwa ukuba ikhadi elungileyo kunokuba imali. Umsebenzisi salaried abasebenzi kuthiwe ukuba baninzi, ukuba abo benza zonke ikhadi yentlawulo izuze uvavanyo eliphezulu. Ngokuba kwakhona kusetyenziswa imali electronic, ungangena Akufuneki yokuhlala yesibini kwiivenkile lula kunye ezinkulu. Kuyinto ikhadi elula kakhulu. Lube-5%. Khomba imarike ANA kunye Rakuten, uyakwazi ukutshintsha iingongoma Amazon kunye Yahoo iindawo zokuthenga.
credit card ekucetyiswa ukuba aba bantu, kwaye abo bakholwayo okulungileyo kubhetele ukuba zibe kunokwenzeka, intlawulo ikhadi oko kumlungele na abantu kucingelwa ukuba ikhadi elungileyo kunokuba imali. Umsebenzisi salaried abasebenzi kuthiwe ukuba baninzi, ukuba abo benza zonke ikhadi yentlawulo izuze uvavanyo eliphezulu. Ngokuba kwakhona kusetyenziswa imali electronic, ungangena Akufuneki yokuhlala yesibini kwiivenkile lula kunye ezinkulu. Kuyinto ikhadi elula kakhulu.